पहिलो चरणको चुनाव ३१ वैशाखमै ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
पहिलो चरणको चुनाव ३१ वैशाखमै !
काठमाडौं, १७ वैशाख – आइतबार बिहान बसेको संसदको बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख ३१ को पहिलो चरणको चुनाव कुनैपनि हालतमा हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख ३१ गतेको चुनाव सर्छ भनेर दुबिधामा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
उम्मेदवारी दर्ताको दिन १९ गतेलाई उत्सवको वातावरण बनाउन व्यवस्थापिका संसद बैठक स्थगित गर्नुपरेको उनले बताए । उनले उम्मेदवारी दर्ता पछि २१ गते बस्ने संसद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल हुने बताए ।
‘१९ गते नोमिनेसनको वातावरण बनोस् भन्नाका लागि २१ गते बैठक राखिएको छ । एउटा उत्सवकै रुपमा नोमिनेसन गराउने अनि ३१ को निर्वाचनको तयारी गर्ने,’ आइतबारको संसद बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन्छ । अब कुनै खालको कन्फ्युजन तपाईं मिडियाका साथीहरुले पर्न र पार्न जरुरी छैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव र उम्मेदवारी दर्ता सँगसँगै अघि बढाउने माहोल बनेको पत्रकारलाई जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको चुनावमा मधेसी मोर्चा पनि सहभागी हुने उनले विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘सबैभन्दा पहिले नोमिनेसन दर्ता गरेर ३१ गतेको निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउने प्राथमिकता दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो,’ प्रचण्डले भने, ‘मधेसी मोर्चा पनि यसमा समझदारीमा आउने स्थिति बनेको छ । उहाँहरु आउनुहुन्छ ।’